टिटे : जसले ब्राजिलको भाग्य कोरिदिए – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ३१, २०७५१६:२८0
काठमाडौं, ३१ जेठ । जतिबेला ब्राजिलको प्रशिक्षकबाट डुंगा बर्खास्तीमा परे त्यो समय २०१८ को विश्वकप छनोट चरण भइरहेको थियो । त्यस यता समय धेरै बदलिएको छ । ब्राजिलको बारेमा विश्लेषण वा मूल्यांकन आगामी आइतबार रसियाको सोची सहरमा हुने खेलमा उसले प्रदर्शन गर्ने खेल कौशल र नतिजाले गर्नेछ ।
डुंगाको ठाउँमा आएका टिटेलाई त्यो छुट हुने छैन कि पाँच पटकको विश्व विजेता ब्राजिललाई लयमा नफर्काउने वा भनौं छैटौंपटक विश्वविजेता नबनाउने । ब्राजिलियनहरुमा त टिटे माथी भरोसा छ नै विश्वभरका ब्राजिलियन समर्थहरुले पनि उनी माथि भरोसा गरेका छन् । कोही कोच आउँदैमा उसले जादु नै त गर्न सक्दैन तर आफ्नो व्यवस्थापकिय कौशलता भने पक्कै देखाउन सक्छ । टिटेले ब्राजिललाई कसरी परिवर्तन गरे र बलियो बनाए भन्ने बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
१. असल सम्बन्ध
ब्राजिलका खेलाडीले उनीहरुका प्रशिक्षक टिटेलाई निक्कै सम्मान गर्छन । एउटा विन्दुमा त्यो सम्मान उनीहरुमा अझै धेरै जाग्छ त्यो हो, साधारण बोल्नेशैली र सबैसँग समदुरिमा कुरा गर्न सक्ने दक्षता । टिनेको टिममा हुने न कोही माथि हुन्छ न कोही तल नै । कसैले पनि आलोचना गर्नु पर्ने अवस्था आउने गरि टिटेले काम गदैनन् । यसले प्रशिक्षकलाई सबैले सम्मान गर्ने र प्रशिक्षकले खेलाडीलाई सम्मान गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कोही पनि प्रेसरमा रहनु पर्दैन । जसका कारण प्रशिक्षकले खेलाडी छनोट गर्दा निर्धक्क भएर गर्न सक्छन् ।
कोच टिटे र उनको टिमले धेरै पटक सँगै यात्रा गरेको छ जहाँ ज्यादै सौहार्दता देखिने गरेको छ । यो टिटेले नेतृत्व सम्हाले पछि देखिएको कुरा हो । युरोपको ट्रेनिङमा जाँदा होस वा अन्य खेलमा जाँदा होस टिटेले सबैलाई उत्तीकै महत्व दिने गरेका छन् । टिटे सबैसँग च्याटमै पनि कुरा गरि रहेका हुन्छन्, त्यो पनि कयौं पटक ।
रियोमै हुँदा पनि टिटे जतिबेला पनि उपलब्ध हुन्छन् । खेलाडीहरुले टिटेलाई आफूलाई लागेको कुरा उनी जस्तो सुकै अवस्थामा हुन्, निर्धक्क भन्ने सक्ने वातावरण रहेको छ । टिटेले क्लबको कोचका रुपमा काम गरि सकेका र धेरै योजनाहरु ल्याउने गरेका छन् ।
३. अ वेल–ओइल्ड युनिट
जब खेल अन्तिम घडीमा हुन्छ वा केही अप्ठेरो अवस्था आइपुग्छ, टिटेले परिस्थितिको हर कोणबाट विश्लेषण गर्छन र निर्णयमा पुग्छन् । टिटेले जे गर्न भन्छन् त्यसले इलाजको रुपमा काम गर्छ । र त्यसले टिमलाई लयमा फर्काउँछ ।
टिटेले आफ्ना स्टार खेलाडीको क्षमता पनि बुझेका छन् । एकै खेलाडीमा भर नपर्नु टिटेको विषेशता हो । उसको पुष्टि नेयमार विना नै रसियालाई ३–० र जर्मनीलाई १–ले हराउनुले गरेको छ । जब बल आफ्नो कब्जामा हुँदैन, तब ब्राजिल विपक्षीबाट बल खोस्न कडा मेहनत गर्छ । यसका लागि अग्रपंक्तिका खेलाडीले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्छन् । परिस्थितिले मागे अनुसार दृढतापूर्वक खेल्छन् । यो एक मेसिन झैं हो, जसले राम्रो गर्छ ।
४. सहि निर्णय
टिटेको पहिलो खेल विश्वकप छनौट चरणमा इक्वेडर विरुद्ध थियो । त्यो पनि क्विटोमा । यो खेलमा उनले ओपम्पिक गोल्ड मेडल जितेका १९ बर्षिय गाब्रियल जेसुसलाई खेलाएका थिए । ब्राजिल ३–० ले विजयी भएको खेलमा जेसुसले दुई गोल गरेका थिए । टिटेले कासिमिरोलाई टिममा बोलाए र मिडिफिल्डमा खेलाए । उनले युवालाई अवसर दिने बाहेक मार्सेलो, थियोगो सिल्भालाई पुनः टिममा फर्काए । उनीहरुलाई डुंगाले टिममा राखेका थिएनन् । मार्सेलो छोटो पास, ड्रिबिलिङ र गोलका लागि अवसर सिर्जना गर्न माहिर छन् । रियल मड्रिडका उनी टिटेको आक्रमणक खेल शैलीका महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन् ।
५. ठोस आधार
रसिया विश्वकपका लागि आफ्नो टिम तयार गर्दा टिटे पत्रकारभन्दा एक कदम अघि देखिए । उनले त्यतिबेला आफ्नो २३ जनाको टोलिमा कोहि पनि आफैं टोलिमा नपरेको बताएका थिए ।
ब्राजिल टोलिमा आफ्नो युग सुरु गर्दै गर्दा टिटेसँग रसियाको लागि टिम बनाउन केवल दुई वर्षमात्र बाँकी थियो । २३ जनामध्ये १५ जनाको टोली छनोट गर्दा टिटे आफ्नो निर्णयप्रती कति दृढ र निरन्तरता दिने सोचमा थिए भन्ने देखाउँछ ।
भारतको काश्मिरमा दाहोरो गोली हानाहानमा परी एक सैनिक र दुई आतङ्ककारीको मृत्यु
एमबाप्पेका लागि काभानी भन्दा नेयमार प्यारा, के हो कारण ?
‘एमबाप्पेले मेस्सी, रोनाल्डो र नेयमारलाई उछिन्छन्’
पानामासँग बराबरीमा रोकियो ब्राजिल